यसकारण आकर्षक छ जापानी शिक्षा, विश्वले गर्छ लोभ | Nepali In Japan
जापानीहरू प्रतिभा र बौद्धिकताका लागि मात्र होइन, शिष्टता र सुसंस्कृत व्यवहारका लागि पनि संसारभर परिचित छन्। तुलनात्मक रूपमा उनीहरू स्वास्थ्य र लामो जीवन बिताउँछन्। आखिर जापान कसरी विश्वका अन्य देशभन्दा अत्यन्तै भिन्न छ त? यसको मुख्य कारण हो, यहाँको शैक्षिक प्रणाली । आउनुस् जापानी शिक्षा प्रणालीका केही विशेषताहरुका बारेमा चर्चा गरौं ।
ज्ञानभन्दा पहिला चरित्रमा जोड
यहाँका विद्यालयमा विद्यार्थीले ४ कक्षा अर्थात् १० वर्षको उमेर नपुगिकन कुनै पनि तनावपूर्ण परीक्षामा सामेल हुनु पर्दैन। उनीहरूले केवल सानातिना जाँच दिन्छन् । विद्यालय प्रवेश गरेको तीन वर्षसम्म बच्चालाई शैक्षिक ज्ञान दिने र त्यसलाई जाँच्ने होइन, बरु असल व्यवहार र चरित्र सिकाउनु पर्छ भन्ने जापानी मान्यता छ। यो समयमा अरूलाई आदरसत्कार गर्न र प्रकृति प्रेम तथा जनावरप्रति असल व्यवहार गर्न सिकाइन्छ। दश वर्षको उमेरसम्म मुख्यतः प्रेम, दया र सहानुभूति जस्ता कुरामा जोड दिइन्छ। त्यस अतिरिक्त उनीहरूलाई धैर्य, आत्मनियन्त्रण र न्याय जस्ता कुरा सिकाइन्छ।
शैक्षिक वर्ष अप्रिल १ देखि
संसारभर विद्यालयका नयाँ शैक्षिक सत्र सेप्टेम्बर वा अक्टोबरमा सुरु हुन्छ। तर, जापानमा शैक्षिक सत्र अप्रिलको पहिलो हप्तादेखि नै सुरु हुन्छ। चेरी फुल फक्रने समयमा विद्यालयको पहिलो दिन सुुरु हुन्छ। शैक्षिक वर्ष तीन भागमा विभाजित हुन्छ। उनीहरूले गर्मी, शिशिर र वसन्त ऋतुमा लामो विदा पाउँछन् ।
जापानका विद्यालयमा विद्यार्थीले आफ्ना कक्षाकोठा, चमेना गृह र शौचालय आँफै सफा गर्नुपर्छ। उनीहरूका निम्ति काम गरिदिने चौकीदार, सुसारे, संरक्षक वा अनावश्यक रूपमा काम गरिदिने मानिस विद्यालयमा हुँदैनन्। विद्यार्थीलाई सानासाना समूहमा विभाजित गरिन्छ र वर्षभरि पालैपालो सबै समूह सबै खाले काम मिलेर गर्छन्। त्यसले गर्दा बच्चालाई आपसी सहयोगको भावना जगाउन र समूहमा काम गर्न सिकाउँछ। त्यसका अतिरिक्त, उक्त अभ्यासले आफ्नो कामप्रति सकारात्मक सोच बनाउन र अरुको कामलाई आदर गर्न पनि विद्यार्थीलाई सिकाउँछ।
विद्यालयमा तोकिएको मेनुअनुसार भोजन र शिक्षकसँगै कक्षाकोठामा खाना
जापानको शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत विद्यार्थीलाई सन्तुलित र स्वास्थ्य खाना दिइन्छ। सार्वजनिक इलिमेन्ट्री र जुनियर हाइ स्कुलमा तोकिएको मेनु अनुसार खाना पकाइन्छ। परिकार बनाउँदा तालिम प्राप्त भान्छे मात्र होइन, स्वस्थ खानासम्बन्धी विषेशज्ञ समेत सामेल हुन्छन्। सबै विद्यार्थीले कक्षाकोठामा शिक्षकसँगै बसेर खान्छन्। त्यसले पनि विद्यार्थी र शिक्षकबीच सकारात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग गर्छ।
विद्यालय पछि पनि कक्षाहरु लोकप्रिय
राम्रा जुनियर हाइस्कुलमा भर्ति हुन, जापानका प्रायः बालबालिका ‘तयारी स्कुल’ वा निजी रूपमा सञ्चालन गरिएका कक्षामा सहभागी हुन्छन्। त्यस्ता कक्षा साँझमा सञ्चालन हुन्छन्। विद्यालयको पढाइ सकेर अतिरिक्त क्रियाकलापपछि फेरि बच्चाहरू साँझका कक्षामा सामेल भएको जापानमा देख्न सकिन्छ। जापानी विद्यार्थी दैनिक ८ घण्टा विद्यालयमा बिताउँछन्। तर उनीहरूले विदा र साप्ताहिक विदामा पनि अध्ययन गरेर बिताउँछन्। त्यसकारण आश्चर्य छैन, त्यहाँका लगभग कुनै पनि विद्यार्थीले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालयमा अनुर्तीर्ण भएर फेरि कक्षा दोहर्याउनु पर्दैन।
परम्परागत विषय बाहेक हातेलेखन र कविता
जापानको चित्रलिपि अथव ‘शोड़ो’ अन्तरगत बाँसको कलम बनाई मसीमा डुबाइन्छ र परम्परागत कागजमा अक्षर लेखिन्छ। जापानीमा ‘शोड़ो’ भनेको परम्परागत चित्रकला जत्तिकै लोकप्रिय छ। त्यस्तै हाइकु अन्तर्गत बुझिने र साधारण शैलीमा अन्तरहृदयका भावना सम्प्रेषण गरिन्छ। उनीहरूका कक्षामा आफ्ना संस्कृतिलाई र सदियौं पुराना परम्परालाई सत्कार गर्न सिकाइन्छ।
सबै विद्यार्थीका लागि पोशाक अनिवार्य
लगभग सबै जुनियर हाइस्कुलका विद्यार्थीका लागि युनिफर्म अनिवार्य गरिएको हुन्छ। केही विद्यालयका आफ्नै पोशाक हुन्छन् भने परम्परागत विद्यालय पोशाक भनेको केटाले सेनाको शैलीमा र केटीका लागि नाविकको शैलीमा कपडा पर्छ। पोशाकको महत्व भनेको सामाजिक र वर्गीय भित्ता तोड्नु हो र सबैका निम्ति एकै काम गर्ने वातावरण बनाउनु हो। त्यसका अतिरिक्त युनिफर्मले विद्यार्थीमा सामूहिकताको भावना जगाउन सहयोग गर्छ।
विद्यार्थीको हाजिरी ९९.९९ प्रतिशत
सायद हामी सबैले कुनै न कुनै दिन विद्यालयबाट भागेका छौं होला। तर जापानका विद्यार्थी कक्षाकोठामा सधँै उपस्थित हुने र समयमा नै विद्यालय पुग्ने गर्छन्। एक सर्भेका अनुसार त्यहाँका ९१ प्रतिशत विद्यार्थीले शिक्षकले पठाएको कुरा ध्यान दिएर सुन्ने गरेको देखाएको छ।
एउटै परीक्षाले विद्यार्थीको असफलता जाँच गर्छ
हाइस्कुल पढाइको अन्त्यतिर विद्यार्थीले एक महत्वपूर्ण परीक्षा दिन्छन् जसले उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ। कलेजहरूले त्यहाँ भर्ति हुनका लागि निश्चित अंक हुनु पर्ने नियम बनाएका हुन्छन्। तोकिएको अंक नपुगीकन उनीहरू त्यहाँ भर्ति हुन सक्दैनन्। प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ। विद्यालय सकेका करिब ७६ प्रतिशतले मात्र आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन्छन्। कलेज प्रवेश गर्नुभन्दा अघिको कठोर परीक्षालाई उनीहरू ‘नर्क’ पनि भन्ने गर्छन्।
कलेज जीवन नै सबैभन्दा आकर्षक विदा
कलेज प्रवेश गर्ने परीक्षा सकेपछि उनीहरूले केही समय आराम गर्छन्। कलेजलाई भने जापानमा मानिसको जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय मानिन्छ। उक्त समयलाई जागिर सुरु गर्नु अघिको ‘विदा’ भनेर पनि जानिन्छ।
Credit | Photo Credit : Carlosbarria / Reuters.com
Prevजापानमा पासपोर्ट हराएमा नयाँ बनाउन के गर्ने ?
Nextयसो गर्नुस्, छिट्टै सिकिन्छ जापानी भाषा